Barbell Squats - Ihe You Chọrọ Knowma Banyere Ha | Bezzia
Susana godoy | 04/05/2021 16:00 | Mmega ahụ
You na-eme ụlọ mmanya barbell? Ọ bụrụ na ịhọrọbeghị echiche dị ka nke a, ị ka nwere oge n'ihi na ị ga-arụpụta ezigbo nsonaazụ. Anyị maara na squats bụ akụkụ nke ọzụzụ ọ bụla bara uru maka nnu ya, ma e wezụga ịdị iche iche, anyị agaghị ada mbà.
Yabụ, taa anyị hapụrụ ndị na-eji mmanya ma otu a, ha na-enye anyị uru na-enweghị ngwụcha ị kwesịrị ịma. I gha amata nke bụ mpaghara kachasị rụọ ọrụ na mgbatị ahụ a na otu ị kwesiri isi mee ha nke ọma. Anyị malitere!
1 Kedu ihe barbell squats na-arụ ọrụ
2 Ihe ndị bụ isi anyị ga-edozi
3 Kedu usoro kachasị mma maka squatting na barbell
Kedu ihe barbell squats na-arụ ọrụ
Nke mbu mgbe obula inwe squat, nke anyị ga na-arụ ọrụ site na nkeji otu bụ quadriceps. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ahụ dị ala bụ otu n’ime ndị protagonists n’ozuzu ya. N'agbanyeghị nke a, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ naanị mmega ahụ maka ụkwụ ọ bụghị. Anyị ahụworị na na mgbakwunye na mpaghara a, lumbar na azụ na-etinyekwa aka. N’ụzọ dị otu a, anyị ga-enwerịrị ezigbo ihe anyị ga-eme iji nwee ike ịnụ ụtọ mmega ahụ ziri ezi. Ọ bụ ya mere anyị ji agbakwunye na dị ka nke abụọ ọ na-agụnyekwa akwara azụ nke apata ụkwụ ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe na akpịrị.
Ihe ndị bụ isi anyị ga-edozi
Otu n'ime mmejọ anyị ga-ezere mgbe niile mgbe anyị na-eme squats bụ iweta ogwe ahụ n'ihu. Mgbe ụfọdụ, n'ihi mmanya ahụ, anyị na-eme ka ubu na-aga n'ihu, nke ga-apụta na azụ adịghị n'ọnọdụ ya kachasị mma. Ya mere, anyi aghaghi iji azu di ala na-agbadaghi ya. N'ezie, mgbe ị na-agbada na ikpere adịghị agafe na ụkwụ ụkwụ. Ikwesighi ikpokọta ikpere gị mgbe ị na-agbada na ọbụlagodi mgbe ị na-arịgo. Ebe ọ bụ na ọ bụ ihe ọzọ nke mmejọ ndị a na-ahụkarị na na anyị ga-ezere ihe ọ bụla na-efu iji jiri ọzụzụ anyị n'ụzọ ziri ezi na na ahụ anyị na-akpachara anya mgbe niile.
Ihe di oke mkpa bu nkpuru banyere nkpuru ala n'onwe ya. Somefọdụ ndị anaghị agbada oke ebe ndị ọzọ anaghị ala ala. Yabụ, ị ga na-ejikọ usoro dị mma. Arụ ọrụ nwere ike imetụta usoro a, yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ọ ka mma ịghara iburu oke ibu. Mgbe ị na-agbada apata ụkwụ ha ga-adaba na ala. N'ụzọ dị otú a, ị maara na nnukwu ahụ amalitelarị ịrụ ọrụ ha, na-echefughị ​​quadriceps na ndị ọzọ.
Kedu usoro kachasị mma maka squatting na barbell
Mgbe anyị hụsịrị mmejọ ahụ, anyị doro anya na anyị kwesịrị ịkụ nzọ na mmegharị ziri ezi ma hapụ ụdị obi abụọ niile. Maka nke a, iji mezuo usoro dị mma, ọ na - eweta usoro dị iche iche, dị mfe n'ọnọdụ ọ bụla, mana ọ bara uru ruo n'ókè:
Anyị na-ebili iji aka abụọ jide osisi ahụ. Ọ ga-emerịrị ka ịdị arọ ya kwe ka anyị nwee ike ịna-agagharị n’ụzọ ziri ezi.
Ma ikpere ma ụkwụ adịghị emeghe nke ukwuu ma n'ọnọdụ dị mma na eke, na-ezere esemokwu na mpaghara abụọ a.
Ga-agbadata na idebe azụ gị kwụ ọtọ, na-enweghị iji aka gị na-aga n'ihu.
Cheta na ikpere ekwesịghị imetụ aka ma ọ bụ ọbụna bịaruo nso. Ya mere anyi aghaghi ime ka ije di ocha na ala. Iji zere ịmanye mmegharị na ọ bụghị naanị ikpere, kamakwa nke nkwonkwo ụkwụ nke na-ekwesịghị ịgbada n'oge ọ bụla.
Ugbu a ị maara ntakịrị, otu n'ime omume ndị bụ isi ị nwere ike itinye n'ọrụ na ụzọ dị mfe. Na-agbanwe ya mgbe niile maka mkpa nke gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Barbell squats
Obere nkọwa ndị na - egbochi gị inwe ndụ ahụike